Uchungechunge lwe-'Sandman 'Audio Oluza kuleli hlobo kusuka ku-Audible ne-DC
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Uchungechunge lwe-'Sandman 'Audio Oluza kuleli hlobo kusuka ku-Audible ne-DC
by Waylon Jordan Mashi 4, 2020
by Waylon Jordan Mashi 4, 2020 777 ukubukwa
Uchungechunge lwamanoveli kaNeil Gaiman, I Sandman, ubeyintandokazi yabalandeli selokhu yaqala ukushicilelwa emuva ngonyaka we-1989, kanti kuleli hlobo, abalandeli bazoba nendlela entsha ngokuphelele yokujabulela laba balingisi ngomdlalo omusha sha womdlalo ovela ku-Audible ne-DC Comics elandiswa nguGaiman uqobo.
Iqondiswe ngu-Dirk Maggs, ukujwayela kuzoba nokuqanjwa kwemisindo ngokucophelela nomsindo ocebile, ogwilizayo ngokusho kokushicilelwa esisanda kukuthola. UMaggs usebenze noGaiman phambilini akha ukuzivumelanisa komsindo kwe- Abafana be-Anansi, Amabika Amahle, Akukaze Kuphele, Futhi Stardust.
Lapho isangoma sizama ukuthatha isimo soKufa sizama ukuthola impilo engunaphakade, kunalokho ngephutha sibambe umfowabo omncane kaKufa uMorpheus, iNkosi Yamaphupho. Ngemuva kokuboshwa kwakhe iminyaka engamashumi ayisikhombisa futhi ekugcineni abaleke, uMorpheus uyaqhubeka nomzamo wokubuyisa izinto zakhe ezilahlekile zamandla nokwakha kabusha umbuso wakhe. The USandman Ulandela uMorpheus, nabantu nezindawo athintekile kuzo, njengoba ezama ukulungisa amaphutha e-cosmic nawabantu awenzile ngesikhathi sokuphila kwakhe okungapheli.
UGaiman ubambe iqhaza kuzo zonke izinyathelo zenqubo, eletha I Sandman empilweni yomsindo noMaggs.
“Cishe eminyakeni engama-30 edlule, uDirk Maggs waya ku-DC mayelana nokuzivumelanisa nezimo I Sandman ifomu elilalelwayo. Akuzange kwenzeke (yize kwaba njalo lapho mina noDirk siwela khona izindlela) futhi ngiyajabula ukuthi akwenzekanga, ngoba siseGolden Age yedrama yomsindo njengamanje, futhi mina noDirk singcono kakhulu kulokho siyakwenza, ”kusho uGaiman esitatimendeni. “Lokhu ukujwayela umsindo okunothile I Sandman Amanoveli wezithombe, aklanywe ngokukhazimulayo ngu-Dirk Maggs, enabalingisi bezinkanyezi zonke. Ngikuthandile ukuba lapho ukuze ngikhulume ukusakaza, lapho ukuze ngifunde imibhalo futhi nginikeze izeluleko ngezikhathi ezithile, nalapho laphaya ezitudiyo, ngibuka umlingo wenziwa nokuqopha ukulandisa. Angikwazi ukulinda kuze kube yilapho izwe lizwa ngalokho esikwenzile. ”
“Lokhu kuzwakala komsindo I Sandman inkulu futhi inombono wayo futhi isekelwe kuphela kumanothi asekuqaleni kanye nemibhalo kaNeil ochungechungeni lwezimpawu zakhe ze-DC. Ukukhiqizwa kwethu kungena ngokujulile emcabangweni kaNeil, kube sengathi ubhala lezi zindaba eceleni kwethu, uphakamisa imininingwane nezinto zendaba ezimbalwa abebezazi kuze kube manje, ”kusho uMaggs. “Umsindo ugcwalisa ngokukhethekile imibono yamahlaya yabaculi kanye nobukhazikhazi bukaNeil bokuqamba, kuyilapho abalingisi bethu abamangalisayo nomculo kaJim Hannigan banezela isibhakela esisha somzwelo. Isikhathi sokukhushulwa seminyaka eyishumi le phrojekthi besifanele umzuzu nomzuzu wokulinda. Yiyona ngqangi kaSandman kaNeil Gaiman. ”
I Sandman bekulokhu kuyisimo esishisayo eminyakeni edlule ngemizamo eminingi yokuzivumelanisa nezimo, iningi lazo elihlulekile ukuthela izithelo - kusanda kumenyezelwa ukuthi INetflix ibikhethe ukuguquguquka kwendaba ngendaba-Ngakho kuzoba yinto ekhethekile kubalandeli ukuzwa lokhu kuguqulwa komsebenzi kaGaiman.
Ungahlola i-AUDIO CLIP yochungechunge olusha ngo UKUFAKA LAPHA.
Alikho igama okwamanje ekusakazeni uchungechunge lomsindo. Isitolimende sokuqala se- I Sandman izotholakalela ukulanda i-Summer 2020 ngesiNgisi ngokukhishwa okulandelayo ngesiFulentshi, isiJalimane, isiNtaliyane neSpanishi.